Ithegi: uhlalutyo lwe-youtube | Martech Zone
Ithegi: uhlalutyo lwe-youtube
NgoLwesine, Julayi 9, 2015 NgoLwesine, Julayi 9, 2015 Douglas Karr
I-RivalIQ sisixhobo sokuhlalutya esinika ucazululo kukhuphiswano kwiinjini zokukhangela nakwimithombo yeendaba zentlalo, izilumkiso, igama eliphambili kunye nedatha ekumgangatho, kunye nophembelelo lophando. I-RivalIQ ibonelela ngolu injini ilandelayo yokukhangela kunye nohlalutyo lweendaba zosasazo kubathengisi bedijithali: I-Twitter Analytics - idatha yeTwitter oyifunayo- kunye nedatha yokuzibandakanya kuyo yonke iTwitter kwilizwe lakho. Kwaye uya kufumana umkhondo wokukhangela umhlaba wakho wonke. I-Facebook Analytics-ukulandelela zonke izithuba-kunye nezithuba zokhuphiswano,
Ukuba awukangeni ngoku, i-YouTube ihlaziye iphakheji yayo ye-Insights kwiphakheji entsha, epheleleyo ye-analytics. Nazi ezinye zeempawu zamva nje kuVavanyo lweYouTube: Iphepha lokujonga ngokubanzi. Ingxelo enzulu ebandakanya ukubalwa kwezibalo njengoko kulinganiswa ngokuthandwa, ukungathandwa, amagqabantshintshi kunye nezinto ozithandayo ezongeziweyo okanye ezisusiweyo. Iividiyo eziphezulu eziqhuba ezona mbono kunye nemirhumo. Ingxelo entsha yokugcinwa kwabaphulaphuli ebonisa ukuba zide kangakanani iividiyo ababukeli bakho
Abantu abaninzi abayazi loo nto, kodwa iYouTube inezibalo ezisisiseko sokuba ulandele iividiyo zakho. Ukuba ungathanda ukwazi ukubona ukuba ngubani ozimilisayo kwaye zingaphi iimidlalo abazifumeneyo, kulula ukusebenzisa isixhobo se-Insight se-Youtube. Kuqala, ngena kwiakhawunti yakho ye-YouTube kwaye ukhethe enye yeevidiyo zakho. Uya kuqaphela iqhosha lokuqonda kwicala elingasekunene: Okulandelayo, khetha ukuFumanisa kwaye uyakufumana uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo: Khetha okufakiwe